१ बर्ष अघि गोगो रोबर्ट बनाएका बुटवलका दुई जुम्ल्याहा दाजुभाईले नया रोबर्ट बनाएका छन्। उनीहरुले बनाएका रोबर्टले नेपाली भाषा बुझ्न सक्ने र नेपालीमै जवाफ फर्काउने खालको बनाएका छन्। यस अघि …
आउँदो हप्ता देशको पूर्वी भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ भने देशको मध्य भागमा मध्यम बर्षा हुनुका साथै पश्चिम भागमा हल्का वर्षा हुने अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। …
इन्टरनेट चलाउदै आएका उपभोक्ताहरुलाई मूल्य वृद्धिको मार पर्ने भएको छ। बजेट आए लगत्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टका …
दुनियाँमा करोडौ मानिसहरुले अकाउण्टको सुरक्षा गर्न सजिलो पासवर्ड राख्ने गर्छन। सम्झन सजिलो हुने र टाइप गर्न समेत सजिलो हुने पासवर्ड राख्ने गर्छन। जसका कारण उनीहरुको अकाउन्ट सजिलै ह्याकर हरुले ह्याक …
भन्सार नियमावली २०६४ का अनुसार अब विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुले २५० ग्राम सम्मका सुनका गहना ल्याउन पाउने भएका छन्। सरकारले सर्बसाधारणका लागि निजी झिटीगुण्टा करमा केही हेरफर गरेको छ। यसै निजी …
पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन खण्डमा पर्ने मुख्य पुल जिर्ण भएपछी निर्माण सुरु भएको नया मुग्लिङ्ग पुल तयार भएको छ। नयाँ आर्क प्रविधिमा मुग्लिन आर्क ब्रिज तयार भएको हो। नेपालका लागि नया प्रबिधिमा …
सरकारी सर्भरमा समस्या आएपछि देशरभरका सरकारी वेबसाइटहरु बन्द भएको छ। जसका कारण सरकारी कार्यालयको सबै काम प्रभावित बनेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सिस्टममा प्राविधिक समस्या आएपछि सरकारी वेबसाइटहरु बन्द …
अब इमेल पनि तपाईं हामीले चाहेको समयमा सेड्युल सेट गरेर पठाउन सकिने भएको छ। गूगलको इमेल सर्भिस जिमेलले आफ्नो प्रयोग कर्तालाई यस्तो सुबिधा प्रदान गरेको हो। अरु काममा व्यस्त हुनुपर्ने …
सूचना प्रविधिको मुख्य माध्यम बनेको इन्टरनेट मूल्यका हिसाबमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियाकै महँगो मूल्य पर्ने देशमा परेको छ । चर्चित म्यागेजिन ‘दी इकोनोमिस्ट’ले हालै सार्वजनिक गरेको समावेशी इन्टरनेट सूचक (इनक्लुसिभ …
फेसबुकको नयाँ फिचर : पठाएको मेसेज पाउनेले समेत नदेख्ने गरी मेसेज डिलिट गर्न मिल्ने
फेसबुकले आफ्नो प्रयोगकर्ताहरुको लागि अति नै राम्रो फिचर उपलब्ध गराएको छ। पठाएको मेसेजलाइ मेटाउन मिल्ने अर्थात डिलेट गर्न मिल्ने फिचर बनेको हो। मंगलबार फेसबुकले यो फिचर सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि …
गुगल प्लस अप्रिल २ मा बन्द हुँदै
February 4, 2019 February 4, 2019 - LeaveaComment
संसार कै ठुलो इन्टरनेट जाएन्ट कम्पनि गुगलले आफ्नो सोसल नेटवर्किङ्ग साइट गुगल प्लस यहि अप्रिल २ बाट बन्द गर्दै छ। यस अघि नै बन्द गर्ने घोषणा गरेको भएपनि बन्द गर्ने …
दुनियाकै पहिलो १ टेराबाइटको ठुलो क्षमताको मेमोरी कार्ड सार्बजनिक
दुनियाकै सबै भन्दा बढी डाटा अट्ने मेमोरी कार्ड बनेको छ। Lexar नामक गरेको ब्राण्डले यो मेमोरी कार्डको बजारमा ल्याएको हो। लेक्सरले विश्वकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै डेटा स्टोर गर्न सक्ने क्षमता …
भिडियो / सुचना प्रबिधी
अमेरिका जाने डिभी लोटरी २०२० यसरि भर्नुस , घरबाटै सित्तैमा भर्नुस ( भिडियो सहित )
अमेरिका जाने डिभी लोटरी २०२० खुलिसकेको छ। संसार भरबाट अमेरिका जाने भाग्यचिट्ठा ‘डाइभर्सिटी भिसा ‘(डिभी) मा आबेदन दिने लाखौ करोडौ हुने गर्दछ। डिभि २०२० का लागि अक्टोबर ३ देखि खुलेको …
किम कर्डासियनका फ्यानहरु साबधान ! इन्टरनेट भाइरसको बिगबिगी
अमेरिकी टिभी स्टार किम सन् २०१८ मा इन्टरनेटमा सर्च हुने सबैभन्दा खतरनाक सेलिब्रिटी बनेकी छिन् । साइबर सेक्युरिटी फर्म म्याकेफीले यस्तै सेलिब्रिटीको एउटा सूची जारी गरेको छ जसको नाममा सर्च …
फेसबुकको डाटा फेरि चोरीयो , ५ करोड प्रयोगकर्ता अकाउन्ट खतरामा
विश्वको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सन्जाल फेसबुकका प्रयोगकर्ताको डाटा फेरि पनि छोरि भएको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ता मध्ये करिब ५ करोड प्रयोगकर्ताको डाटा फेरि पनि चोरी हुदा प्रयोगकर्ताको गोपनियता र अकाउन्ट ह्याक …
तपाईंको फोन सक्कली हो कि नक्कली ? यसरी जाच गर्नुहोस………………
तपाइँ हामी जो कोहिले पनि गोजीमा मोबाइल बोकेर हिडेका हुन्छौ। साधारण फोनको तुलनामा स्मार्टफोनको लोकप्रियता बढी छ । अत्याधुनिक सुविधा सहितका फोन उपलब्ध हुनु यसको बिशेसता हो । बजारमा बढ्दो …
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एकाउन्ट नहुने नेपाली सायदै होलान। तर धेरै अहिले सामाजिक संजालमा समस्या भोग्ने गरेका छन्। फेसबुकमा लाखौ करोड फेक अकाउण्ट रहेको छ। तेस्तो फेक र झूटो एकाउन्टका कारण …
तपाइको मोबाइल हरायो ? अब अनलाइनबाटै फर्म भरि हराएको मोबाइल खोज्नुस
मोबाइल हरायो भनेर दूरसञ्चार कार्यालय धाइरहन पर्ने झन्झट बाट मुक्ति हुने भएको छ। यदि तपाइको मोबाइल हरायो भने घरमै बसी इन्टरनेटको माध्यम बाट खोज्न सकिने भएको छ। मोबाइल हराउदा खोजिदिन …